Cabdikariin X.Guuleed.“Doorashadu in lagu dhawaaqo waa muhiim ” - Awdinle Online
Cabdikariin X.Guuleed.“Doorashadu in lagu dhawaaqo waa muhiim ”
Cabdikariin Xuseen Guuleed Madaxweynihii hore ee Galmudug sidoo kalena soo qabtay xilka Wasiirka Amniga Dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay hadalkii Madaxweyne Farmaajo ee la xiriiray qabsoomidda Doorashada dalka.
Guuleed ayaa tilmaamay in arrintaan ay u wanaagsan tahay sii socoshada Qori isu dhiibka Dowladaha oo afartii sanaba mar la qabto Doorasho laguna soo doorto Dowladda xigta tan markaas waqtigeedu idlaado.
“Waa go’aan wanaagsan hadalka Madaxweynaha ee ah in dalka ay ka dhaceyso Doorasho oo aan jiri doonin muddo kororsi, balse waxaa mudan in la isweydiiyo oo laga baaraandego waqtiga la heysto iyo howsha la rabo in la sameeyo” ayuu Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Cabdikariin dhanka kale waxa uu soo jeediyay in Baarlamaanka Soomaaliya ay mas’uuliyad iska saaraan sidii loo dhaqangelin lahaa xeerarka Doorashooyinka oo ay horay u meel mariyeen labada Gole.
Cabdikariin Guuleed oo sameystay xisbi siyaasadeed ayaa doonaya inaysan madaxda dalka sameysan wax muddo kororsi ah oo dowladda hadda jirto looga cabsi qabao inay waqti ku darsato muddo xilheynteeda, xisbiyada dalka ka jira ayaana ka dhursugaya tallaabada ay qaadi doonaan dowladda Farmaajo oo wax ka yar 8 bilood ay u harsanyihiin.
Guddiga doorashooyinka ayaan wali shaaca ka qaadin nuuca doorasho ee dalka ka qabsoomi doonta iyada oo guddigaanna ay baarlamaanka dalka hor imaan doonaan 27-ka bishan waxaana lawada sugayaa waxa ay markaasi sheegi doonaan.
Previous articleBanaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweyne Farmaajo oo ka socda Muqdisho
Next articleDeegaano lagala wareegey Al-Shabaab